စံရွှေရတနာ ကျောင်းတိုက် တရားထိုင် ဓမ္မာရုံအလှူ
စံရွှေရတနာ ကျောင်းတိုက် တရားထိုင် ဓမ္မာရုံ
မြစိမ်းတောင် ဆရာတော်ဘုရား၏ သြဝါဒအရ တပည့်တဦးဖြစ်တဲ့ ဆရာတော် ဦးဥက္ကဋ္ဌ ဟာ တိုက်ကြီးမြို့နယ်၊ သရက်ချောင်း ကျေးရွာအုပ်စုရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်းမရှိတာ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့ ဇီးဖြူကုန်းကျေးရွာ စံရွှေရတနာကျောင်းမှာ သီတင်းသုံးနေထိုင်ပါတယ်။ 2011 ခုနှစ် ထိုကျေးရွာ မှာ စ သတင်းသုံးစဉ်ကတည်းက ဆရာတော် ဦးဥက္ကဋ္ဌက ယောဂီများကို တရားပြသပေးလျှက်ရှိရာ ယောဂီများ များပြားလာတဲ့အတွက် ယခုအခါ တရားထိုင်ရန်နေရာနှင့်ပတ်သက်ပြီး အခက်အခဲတချို့ရှိနေပါတယ်။ ထို့အတွက် ဓမ္မမိတ်ဆွေ ဗိသုကာ ပညာရှင်များနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ယခုတင်ပြထားတဲ့ တရားထိုင် ဓမ္မာရုံပုံစံ တခုကို ယခုနှစ် ၂၀၁၉ မေလလောက်က စီစဉ်ပြီး ဆရာတော် ဦးဥက္ကဌအား တင်ပြလျှောက်ထားပြီး သြဝါဒ ခံယူခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ တရားထိုင် ဓမ္မာရုံမှာ ၂၈ ပေ အကျယ် x ၁၀ ပေ အရှည် ဘုရားခန်း နှင့် ပေ ၅၀ အကျယ် x ပေ ၁၀၀ အရှည် တရားထိုင်ခန်းမ အပါအဝင် စုစုပေါင်း အကျယ်အဝန်းမှာ ၆၆ ပေ အကျယ် x ၁၀၈ ပေ အရှည် (စုစုပေါင်း ၇၁၂၈ စတုရန်းပေ) ရှိပါတယ်။
စုစုပေါင်း ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ မှာ မြန်မာငွေ သိန်း ၁၅၆၀ ခန့် ဖြစ်ပါတယ်။ လှူဒါန်းလိုသူများအနေဖြင့်
(၁) ဘုရားဆင်းတု နှင့် ပလ္လင်အတွက် ခန့်မှန်း ၅၅ သိန်း (S$ 5000)
(၂) ၂၈ ပေ x ၁၀ ပေ အကျယ် ဘုရားခန်းအတွက် ခန့်မှန်း ၉၈ သိန်းကျပ် ( စင်္ကာပူ S$ 8900 )
(၃) တရားထိုင်ခန်းမ ဆောက်လုပ်ရေး ကုန်ကျစရိတ် ခန့်မှန်း ၁-စတုရန်းပေ လျှင် ၂၂၀၀၀ ကျပ်နှုန်း ( စင်္ကာပူ S$ 20 ) ဖြင့် မိမိတို့ သဒ္ဓါတရား နည်းများ မဆို ကုသိုလ်ပါဝင်လို့ရပါတယ်။ (ဥပမာ ၂ စတုရန်းပေ S$ 40၊ ၅ စတုရန်းပေလျှင် S$100 စသည်...) နှုန်းဖြင့် လှူဒါန်းလို့ရကြောင်း နိဗ္ဗာန်အကျိုးမျှော်၍ နှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။
လှူဒါန်းရတဲ့ ကုသိုလ်ကြောင့် မဂ်၊ ဖိုလ် နိဗ္ဗာန်ကို လျှင်မြန်လွယ်ကူစွာ မျက်မှောက် ပြုနိုင်ကြပါစေ။ သာဓု…. သာဓု…. သာဓု….
ကိုထင်ကျော် 09 428 183 690 ( Yangon)
ကိုဝင်းဇော်ဦး 09 4307 0483 (Yangon)
AYA Account : 0122 2240 1000 3286 (Myanmar)
KBZ Account : 069 501 06901319001 (Myanmar)
****Update အလှူရှင်စာရင်းအရ စတုရန်းပေ 1213.79 ပေ လှူတန်းရန်ကျန်ရှိနေသေးပါတယ် ခင်ဗျာ*****
စံရွှေရတနာ ကျောင်းတိုက် တရားထိုင် ဓမ္မာရုံအလှူရှင်စာရင်း
****Update အလှူရှင်စာရင်းအရ စတုရန်းပေ 1213.79 ပေ လှူတန်းရန်ကျန်ရှိနေသေးပါတယ် *****
စဉ် အမည် စတုရန်းပေ အလှူငွေ (S$)
4 ဦးပိုင်စိုး ဒေါ်ခင်မြသန်း မိသားစု
6 ဦးအေးကျော် ဒေါ်တင်တင်မြ သမီးဒေါက်တာသက်ခိုင်ဇင်မိသားစု
7 ဦးဟုတ်စိန် + ဒေါ်ရင်နွဲ့ အမှှုးထား၍ သမီး မသက်သက်ခိုင်
8 ဦးစံမာ+ဒေါ်ဒေါင်း သမီးမဝင်းဝင်းမြင့် မိသားစု
9 ဦးချစ်သောင်း+ဒေါ်ကြည်ကြည်စိန် မိသားစု
11 ဦးခင်မောင်သိန်း ဒေါ်ခင်မျိုးတင့် သား မောင်ဟိန်းထွဋ် သမီး မနွဲ့ချယ်ရီခိုင် မိသားစု
12 မိ ဘ များ အား အ မှူး ထား ၍ မ ဆွေ ဆွေ ဝင်း
13 နှစ်ဖက်သော မိ ဘ များ အား အ မှူး ထား ၍ ကိုသန်းထိုက်+မသင်းယုဆွေ ၊ သား မောင်ဟိန်းထက်အောင် မိသားစု
14 ဖိုးဖိုးဖွါးဖွါး ဖေဖေ မေမေ တို့အားအမှူးထားပြီး သမီးလေး ဆုပြည့်အိမ်
15 ကွယ်လွန်သူ ဦးအောင်ထွန်းလိူင်အား ရည်စူး၍ ဒေါ်စံအောင်ခိုင် မိသားစု
16 ဦးကြိုင်ဝှက်+ဒေါ်ကြည်ဝင်း တို့အားရည်စူး၍ ဦးသွန်းလှိုင်+ဒေါ်လှလှပုံ သားသမီး မြေးမြစ် မိသားစု
17 စ်ဖက်သော ဖိုးဖွားမိဘများအားရည်စူး၍ ဦးသွန်းလှိုင်+ဒေါ်လှလှပုံ သား- ပြည့်ဖြိုးလှိုင်+မဝင်းဝှေ့ သမီး-သိဂီၤလှိုင် သား- ကျော်ဖြိုးလှိုင်+မရှောင်ကြွင်း မြေး ENTON LIM + JOVBRN LIM
18 ဦးခင်ညွှန် (ခေါ်) ဦးတိုင်း+ဒေါ်ကျင်မြိုင်တို့အားရည်စူး၍ ဦးသွန်းလှိုင်+ဒေါ်လှလှပုံ သားသမီး မြေးမြစ် မိသားစု
19 ဦးလင်စိန်လျောင်+ဒေါ်မြဝင်း တို့အားရည်စူး၍ ဦးသွန်းလှိုင်+ဒေါ်လှလှပုံ သားသမီး မြေးမြစ် မိသားစု
20 နှစ်ဖက်သော မိဘများအား ဦးထိပ်ထား၍ မောင် ကျော်ဖြိုးလှိုင်+မရှောင်ကြွင်း မိသားစု
21 မိဘများဖြစ်သော ဦးသွန်းလှိုင်+ဒေါ်လှလှပုံ တို့အား ဦးထိပ်ထား၍ သမီး-သိဂီၤလှိုင်
22 ဦးကျော်ဆိုင်ဝင်း+ဒေါ်သက်သက်ခင်( ဆရာလေး မဣန္ဒြာရီ) မိသားစု
24 ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကြီး ဦိးပို့ကျွမ် နှင့် ဦးမြင့်စိုး အား ရည်စူး၍ ဦးကျော်သူဝင်း+ဒေါ်သင်းသင်းစိုး မိသားစု
25 နှစ်ဘက်မိဘများအား အမှူးထား၍ ဦး သူရ၊ဒေါ်ညွန့်ညွန့်ဝေ သမီးစုရည်ဝင်း၊စုရည်လင်း၊ပြည့်ရဲအောင်
26 ဦးသိန်းစိုး၊ ဒေါ်စိမ်းစိမ်း၊ သမီးကြီး စုငြိမ်းချမ်း၊ သမီးငယ် ထက်ဝေစိုး မိသားစု
27 ဦးစဝ်နွဲ့ဆားတော် မိသားစု (မြစ်ကြီးနားမြို့)
28 ဒေါ်စွဲ့သန်းစိန်မိသားစု (ရန်ကုန်မြို့)
29 မိဘများအား အမှူးထား၍ ဦးဝင်းနိုင် + ဒေါ်စွဲ့လန်းခိုင်
30 ဦးလုံးစိန်+ဒေါ်ဌေးဌေးရီ မိသားစု
31 ဦးမင်းတင့်ဆန်း+ဒေါ်ခင်ချိုချို မိသားစု
32 ကွယ်လွန်သူ မိဘနှစ်ပါးအားရည်စူး၍ သား မောင်ဝင်ထွန်းလင်း
34 မဆွေဆွေမြင့်၊ မခင်စံပယ်
35 Wang Huei Man & Chen Mei Chu
36 ခင်ပွန်းကြီး ၁၀ ပါးအား ရည်စူး၍ မမျိုးသော်တာ
37 ဦးမြတ်ဌေးလင်း + ဒေါ်စုစုကို၊ သား ကိုမြတ်ကိုအေး+ Drကေဇင်ဟန် - မြေး မောင်ပီတိ၊ သမီးမရတီလင်း မိသားစု
38 ကို စိုးစိုးစံ+ မတင်တင်ခိုင်
39 ကိုမင်းထွဋ် ဝင်း + မချိုနှင်းအေး
40 ဦးသန်းမြင့်ဦး + ဒေါ်ရီရီနိုင်သမီး မအေးမြတ်မွန်သားစု
41 ကွယ် လွန်သူ ကျေးဇူး ရှင် မိခင် ကြီး ဒေါ်အမာ ကြည် အား ရည် စူး ၍ ကျန် ရစ် သူ ခင် ပွန်း ဦးမြင့်ကြည် , ကို ခင်မောင် ချို,မမြင့် သီတာကို ကျော်ကျော် မသိင်္ဂီမြင့်မြေး ,မြစ်
42 ကွယ် လွန်သူ ကျေးဇူး ရှင် ဖခင် ကြီး ဦးတင် အောင် အား ရ ည်စူး ၍ ကျန်ရစ်သူ ဇနီး ဒေါ်အေးအေး ကြည် |ကို ကျော်ကျော် + မ သိင်္ဂီ မြင့်, မြေး Noel Lim
43 ဦးကျင်ဝမ်း+ဒေါ်မြစိန် မိသားစု
44 နှစ်ဖက်မိဘများကို အမှူးထား၍ ကိုကျော်စွာဝင်း+မဝင်းလဲ့ရွှေရည် သား မောင်ဝေလျှံကျော် သမီး မဝင့်စန္ဒီ မိသားစု
45 မိဘဆရာအဖိုးအဖွား များအား အမှူးထား၍ ဦးထင်ကျော်+ဒေါ်မြတ်မင်းမာလာထွန်း သမီး မအိရှင်းသန့် သား မောင်ဉာဏ်လင်းထင် မိသားစု
46 ကွယ်လွန်သူ ကျေးဇူးရှင် ဖခင်ကြီး ဦးတင်အောင် အား ရည်းစူး၍ မိခင်ကြီး ဒေါ်အေးအေးကြည် သား ကိုမြတ်သူအေး+မဇင်မာဝင်း မြေး မောင်ရဲရင့်မြတ်သူ မိသားစု
47 ကွယ်လွန်သူ ကျေးဇူးရှင် ဖခင်ကြီး ဦးဝင်းစိန် အား ရည်းစူး၍ မိခင်ကြီး ဒေါ်ရင်နု ၊သမီး မသင်းသင်းမော်၊ သား ကိုနိုင်ဝင်း+မယုယုနိုင်၊ သမီး ကိုမြတ်သူအေး+မဇင်မာဝင်း မြေး မောင်ရဲရင့်မြတ်သူ မိသားစု
48 ဦးဝေလွင်+ဒေါ်သန်းသန်းမြင့် သမီးကြီး Primrose , သမီးငယ် ချယ်ရီေ၀ မိသားစု
49 ကိုချမ်းမင်း+ မမိမိအောင်၊ သားမောင်ရှင်းသန့်ညီ မိသားစု
51 ဦးရဲဝင်း+ ဒေါ်အေးအေးမူ သား-ကိုရဲနိုင်ဦး-သမီး မခိုင်ငြိမ်းချမ်းမောင် မိသားစု
52 ကိုထွန်းနိုင်လင်း + မနွဲ့လေးရီ သား မြတ်ထက်လင်း မိသားစု
53 ကိုအောင်အောင်+မနွယ်နီဝင်း မိသားစု
54 ဦးနိုင်နိုင်အောင်+ဒေါ်အေးအေးမော် မိသားစု
55 ဦးတော့မင်း+ ဒေါ်ရွှေ မိသားစု
56 ဦးအေးမင်း- ဒေါ်ခင်စိန် သမီး မအေးစုလှိုင် မိသားစု
57 ကိုနေမင်းသူ+ မဝါဝါထွန်း ( iMyanmarHouse Co.,Ltd )
58 ကိုအောင်ကိုဦး၊ ကိုဝင်းထွန်းဆင့်၊ ကိုအောင်ပြည့်စုံအေး၊ ကိုဝင်းဇော်ဦး ( F1 Construction Co.,Ltd )
59 ဦးကြည်ဝင်း+ ဒေါ်ကျင်ထွေး
60 ဦးထင်ကျော်ထက်၊ ဦးဇေယျာလင်း၊ဒေါ်နှင်းသက်ခိုင်
63 ဦးဝင်းဇော်ဦး+ ဒေါ်ဌေးသန္တာအေင်
64 ဦးဝင်းလှိုင်၊ ဦးတင်ရဲသီဟ၊ဦးကျော်ဇင်ထွန်း
65 ဦးအောင်ဇော်လင်း (ပန်းရံအဖွဲ့)
66 ဦးကျော်စွာလင်း (ရေ/ မီး)
67 ကိုဝင်းမော်+ မဖြူဖြူ
68 ဦးသက်မောင်မောင်+ ဒေါ်သရဖီမျိုး
69 ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကြီး ဦးစံတင် + မိခင်ကြီး ဒေါ်ကြည်ကြည် အားရည်စူး၍ သားသမီးမြေးတစ်စု
71 19/Aug/2005 တွင်ကွယ်လွန်သူ မိခင်ကြီး ဒေါ်ခင်စန်းမြင့်အား ရည်စူး၍ မဝင်းလဲ့ဖြူ မိသားစု
73 ဦးတင်အုန်း ဒေါ်ခင်မြင့်ကြည် သမီး မချောစုတင် (မန္တလေး)
75 Jeffery Lim+ Soh Xin Hui သား Enton Lim , Jovern Lim
76 ကိုဒေးဗစ်ကျော်+မချောစုဝင်း မိသားစု (Jackson Global Myanmar & Global Lotus Limited ကိုထင်ကျော်+ မညွန့်ညွန့်မော်၊ သား မောင်ကျော်ဇင်သန့်၊ သမီး မသင်းထက်စံ မိသားစု (Jackson Global Myanmar & Global Lotus Limited )
77 မိဘနှစ်ပါးကို ဦးထိပ်ထား၍ သမီး မခင်ပြည့်ပြည့်ထွန်း
79 ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကြီး ဦးစံတင် အားရည်စူးပြီး မိခင်ကြီးဒေါ်ရင်မေအားအမူးထား၍ ဒေါ်ဥမ္မာစံ မှ စံရွှေရတနာ ကျောင်းတိုက် တရားထိုင်ဓမ္မာရုံ တည်ဆောက်ရေးအတွက် ကျပ် ၁သိန်း လှူဒါန်းသွားပါတယ်။
80 နှစ်ဖက်သောမိဘများအားအမှုးထား၍ဦးဖြိုးဝေအောင် + ဒေါ်ခင်နှင်းဆီ
81 ဒေါ်သီသီလှိ ုင်
84 ဖေဖေဦးတင်အောင်ဝင်းနှင့် သမီးရည်မွန်အောင်ဝင်း တို့၏မွေးနေ့ အလှူ
87 မိဘ နှစ်ပါးဖြစ်သော ဦးမောင်နွဲ့ +ဒေါ်ရီရီဝင်း တို့အား အမှူးထာ၍ (သား) ကိုကျော်စည်သူ
90 ဒေါ်သီသီလှိ ုင်
91 ကိုစိုးဝင်း+ဒေါ်ခင်ကြူအုန်း သမီး မအေးမြဖြိုး ၊ မချမ်းမြေ့စိုး မိသားစု
92 Liu Bao Xia
93 ဦးမင်းစိုး+ဒေါ်မွန်ဇင်အေး ( ဈာန်ထူးအောင် ကုမ္ပဏီ)
94 ဖိုးမြဟန်+ ဖွားဒေါ်သိန်းမြ အားရည်စူး၍ ဒေါ်ရီရီမြင့်နှင့် သားသမီးများ၊ ရန်ကင်း ရွှေအုန်းပင် အိမ်ရာ (၂)
95 အစ်ကို ဦးယုလွင်အောင်အား အမှူးထား၍ ညီမ ‌‌ဒေါ်ဖြူစံပယ်အောင်
96 ဦးကိုကိုကြီး+ဒေါ်အေးမိ မိသားစု
97 ဒေါ်နီ မိသားစု (မြောက်ဒဂုံ)
98 မိခင်ကြီးဒေါ်စန်းကြည်အား အမှုးထား၍ ဒေါ်စန်းစန်းလှ (တောကျွဲအင်းမြို့)
100 ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကြီး ဦးမဲငယ် ၊ဦးအောင်မင်း အားရည်စူး၍ ကိုအောင်သူလင်း+မခင်ဇီဇဝါ သမီးလေး ဖြိုးသိင်ဂါသူ မိသားစု
104 Ng Kai (ခေါ်) သျှမ်း လျှံ ဇန် ရက်၁၀၀ ပြည့် မွေးနေ့ အလှူ
105 ကိုမျိုးမင်းထွန်း+မနေခြည် မိသားစု ၊ လယ်တီ-၃ လမ်း ၊ ရှမ်းစုရပ်ကွက်၊တိုက်ကြီး
၁ သိန်း ကျပ်
106 Archi Group
108 ဦးဖေဝင်း+ဒေါ်မာမာကျော် မိသားစု ကောင်းမှု
109 ကိုတင်ထွန်း+မသိမ့်သိမ့်သူ သမီး မြတ်သီရိအောင် မိသားစု
110 ကွန်လွန်သူ ဖခင်ကြီး ( ဦးလီရှောင်ဖု) အားရည်စူး၍ မိခင်ကြီး ဒေါ်ရှီးပင်းဖွမ် အားအမှူးထား၍ ဒေါ်သန်းသန်းမြင့် ( အားကျွမ်း) ကောင်းမှု
111 (ဖခင် ဦးထွန်းမြင့်) အား ရည်စူး၍ မိခင် ဒေါ်ရင်ရင်ရွှေ မိသားစု
112 ဦး​ဝေလင်းအောင်+ ​ဒေါ်ဇာဇာလွင် မိသားစု (မြောက်ဒဂုံ)
113 Alex Liu Aung Kyaw , Mya Mya Htay daugher Liu Bao Xia
114 ဦးပြုံးအားရည်စူး၍ ဒေါ်သန်းတင် မိသားစု ပျဉ်းမနားမြို့
115 ကိုထွန်းအောင်ကျော်+ မစောမြင့်သွယ် သား ထက်မြတ်ထွန်း မိသားစု မှ မစောမြင့်သွယ် မွေးနေ့ အလှူ
116 ဦးမြင့်လွင်+ ဒေါ်သန်းသန်းရွှေ သား- အောင်သန်းဦး၊ သမီးကြူကြူစိုး၊ ခင်ခင်စိုးခန်းလင့်၊ အေးချမ်းသန္တာဟန် မိသားစု (တောင်ကြီးမြို့- ကန်ရှေ့ရပ်ကွက်၊ ဇောတိကလမ်း)
117 ကိုမြင့်ဇော်+မစိုးပပမွန် မိသားစု
118 ဦးအောင်စိန်ကီး+ဒေါ်စောအေး မိသားစု
120 ဦးသန်းမြင့်ဦး+ဒေါ်ရီရီနိုင် သမီး မအေးမြတ်မွန်
123 အဘွား ဒေါ်ကျင်စိန် မွေးနေ့ အလှူ
124 နှစ်ဖက်သော မိဘများအား ရည်စူး၍ ဦးတင်မောင်ဝင်း+ဒေါ်ခင်မျိုးတင် သား ဝေဖြိုးအောင် သမီး မေသူခင် မိသားစု ( ၆ မိုင်ခွဲ ၊ ရန်ကုန်မြို
126 ဦးစောလွင်+ဒေါ်ခင်ရီ သမီး ခင်ဝေလွင်၊ ကိုကိုလွင်၊ ညီညီလွင် မိသားစု
127 ကိုအောင်ကျော်စိုး+မဝါဝါငြိမ်း သား ရှင်းသန့်တည်ကြည် ၊ ဟယ်ရီလင်းသန့် ( Seven Diamonds Construction)
128 ဦးသောင်းထိုက်+ဒေါ်စိန်ရီ မိသားစု
129 ဦးထွန်းကြည်+ဒေါ်ခင်ခင်ဦး မိသားစု
130 မိဘဆရာသမားများအား အမှူးထား၍ ကိုဇေယျာအောင် မညွှန့်ရီ မိသား
131 ဦးတင်အုန်း+ ဒေါ်ခင်မြင့်ကြည် သမီး မချောစုတင် မိသားစု (မန္တလေး )
133 မအိရှင်းသန့် ၁၄ နှစ်မြောက်မွေးနေ့
134 ကိုလင်းမြတ်(ခ)ကိုဟန်ဇော်ဦး မိသားစု
135 ၁၀.၀၂.၂၀၂၀ နေ့တွင်ကျရောက်သော ကိုနေမျိုးဦး မွေးနေ့အလှူအဖြစ် ကိုနေမျိုးဦး+မစုယဉ်ထွေး သမီး စင်သီယာဦး သား နေလင်းဦး မိသားစုု
136 "ကိုမျိုးအောင်စန်း+ မကျော့ကျော့ခိုင် သမီးစောရဒီယာ မိသားစု မှ စင်္ကြန်လမ်းကြွေပြားအခင်း ၁၉.၅ ကျင်း အတွက်"
137 ကျေးဇူးရှင်နှစ်ဘက်မိဘများအားအမှူးထား၍ ကိုဇာနည်စိုး+မဇာခြည်သိမ့်သိမ့်သားသမီးမြေးတစ်စု ကြှနျးပါကေး ၁၀ ပေ ပတျလညျ ၁ကငြျး အတှကျ
138 ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကြီး ဦးကိုကို (၂၃) နှစ်ပြည့် ရည်စူး အလှူအဖြစ် ဦးမြတ်ဌေ:လင်း+ ဒေါ်စုစုကို မိသားစု
139 မဥတ္တရာ ညီအမ မိသားစု (တိုက်ကြီးမြို့)
140 ဦးစိန်သန်းအောင်+ ဒေါ်ဝင်းကြည် မိသားစု
141 ဦးဘညွန့်အားရည်စူး၍ ဒေါ်အမာကြင် မိသားစု (မန္တလေး)
142 ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီး ဦးထွန်းအောင်ကျော်+ မိခင်ကြီး ဒေါ်လီလီဖြူ အားရည်စူး၍ ဦးသီဟ+ ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်း မိသားစုု
143 ဦးရွှေနီ (ပန်သစ္စာ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း ရောင်းဝယ်ရေး၊ တိုက်ကြီးမြို့ ) မှ "ဘိလပ်မြေ အိတ် ၁၀၀"
144 ကွယ်လွန်သူ မိဘနှစ်ပါးဖြစ်သော ဦးအေး+ဒေါ်စန်းစန်းလွင် အား ရည်စူး၍ သား-မောင်အောင်ပြည့်စုံအေး မှ ၁၀ ပေ အကျယ် လှေကား အလှူ
145 နှစ်ဖက်မိဘများကို အမှူးထား၍ ကိုဖြိုးတင်သန်း မနွေးယုအောင် သမီး ထူးမြတ်နိုး မိသားစုမှ ၁၀ ပေ အကျယ် လှေကား အလှူ
146 ကျေးဇူးရှင် မိဘများနှင့် ခင်ပွန်း ဗိုလ်မှူးစိန်စန်း တို့အားရည်စူး၍ ဒေါ်လှရင် နှင့် သားသမီးများ ၊ မြေးများ (ရန်ကုန်မြို့)မှ ၁၀ ပေ အကျယ် လှေကား အလှူ
147 ၂၂-၀၂-၂၀၂၀ (ဖခင်ကြီး ဦးမြင့်လွင် ၈ နှစ်ပြည့် ရည်စူးအလှူ) မိခင်ကြီးဒေါ်ကြည်ကြည်ဆွေအားအမှူးထား၍ ဦးအောင်မိုး+ဒေါ်သင်းသင်းလွင် (သား) မင်းဟိန်းအောင်၊ ဇော်ထွဋ်အောင် မိသားစု (စင်္ကာပူ) မှလှေခါး (၁) ဆင်း နှင့် Wheelchair Access Ramp အတွက်
148 မိဘများအားအမှူးထား ပြီး ကိုဇော်သူရအောင် - မချောယုအောင် မိသားစုမှ စံရွှေရတနာ ကျောင်းတိုက် တရားထိုင်ဓမ္မာရုံ အနောက်ဘက် 20 ft အကျယ်လှေခါးအတွက်
149 ဦးမောင်မြင့်+ဒေါ်ကျင်စိန် မိသားစု
150 ကိုဇော်ယုခိုင်+ မမြတ်ယမင်းလှိုင် သမီး Angela Wu Si Xian မိသားစု (စင်္ကာပူနိုင်ငံ)50ft+ကျွန်းပါကေး
153 မမဝတ်ရည်ထိုက်နှင့် ကာစတန်မာများ
154 ကိုရဲမျိုးကျော်+မနန်းထွေးခမ်း သား စိုင်းခန့် မိသားစု
155 ကိုတင်ဝင်းအောင်+မမြတ်ပန်းငုံ မိသားစု
156 မစန်းခါး နှင့်မိသားစု မှ ပါကေးခင်းရန်အတွက်
158 ကိုမြတ်နေထွန်း + မအေးဇာလီ သား သူရိန်သန့်စင် သမီး မြတ်သီရိ သော် မိသားစု်
159 ကွယ်လွန်သူ ဦးကြည်လိုင်း အားရည်စူး၍ ဒေါ်တင်အေး ( သမီး) မဇာကြည်အေး မိသားစု-ကျွန်းပါးကေး တစ်ကျင်း
160 မိဘများအား အမှူးထား၍ ကိုအေးမောင်+မသိမ့်သိမ့်အောင် မိသားစု-ကျွန်းပါကေး အတွက်
161 ဦးကျော်သူဝင်း+ ဒေါ်သင်းသင်းစိုး မိသားစု(စင်ကာပူ)
162 ကိုဇော်မိုးစံ+ မသန်းသန်းဌေး သမီး စုသီရိစံ( ဟုန်ဟုန်) မိသားစု-အထွေထွေ အလှူငွေ
163 ကိုဇော်မိုးစံ+ မသန်းသန်းဌေး သမီး စုသီရိစံ( ဟုန်ဟုန်) မိသားစု-ကျွန်းပါကေး အတွက်
164 ကွယ်လွန်သူမိဘများအားရည်စူးပြီး ဦးအောင်ဝင်း+ဒေါ်ညိမ်းလှ မိသားစု -ကျွန်းပါးကေး တစ်ကျင်း
166 ဦးစိုင်းတွမ်လိတ်+ ​ဒေါ်နန်းမြင့်​အေး သား စိုင်း​အောင်ဘုန်းပိုင် (ထွန်း​ပေါက် Car Aircon Service) မိသားစုမှကျွန်းပါးကေး ၅ကျင်းစာအတွက်
167 မောင်ဆက်နိုင်+ မဝင်းဝင်းမာ မိသားစု (စင်ကာပူ)
168 ကွယ်လွန်သူ ဦးတင်ထွန်းအားရည်စူး၍ ဒေါ်တင်ရွှေ မိသားစု
169 ဦးစိုင်းမွန်း+ ဒေါ်ခင်ဖြူ၊ ဦးစောလွင် +ဒေါ်မာမာရီ၊ ဦးစိုင်းနိုင်အောင် တို့ အား ရည်စူး၍ ဒေါ် သန်းသန်းဌေး မိသားစု၊ ဦးစိုင်းအောင်မင်း +ဒေါ်မြင့်မြင့်သန်း မိသားစု၊ ဦးမြကြီးအောင် +ဒေါ်ဌေးဌေးစိုင်း မိသားစု တို့မှ ကျွန်းပါကေး တစ်ကျင်းစာ အတွက်
170 ကွယ်လွန်သူမိဘများ ဖြစ်ကြသော ဉီးမြင့်မောင်+ ဒေါ်တင်ညွန့်၊ ဉီးစိုင်းမွန်း + ဒေါ်ခင်ဖြူ တို့အားရည်စူး၍ဉီးမြကြီးအောင်+ ဒေါ်ဌေးဌေးစိုင်း၊ သားလင်းထက်အောင်၊ဖြိုးသန့်အောင်၊ မင်းသန့်အောင် မိသားစု မှ ကျွန်းပါကေး တစ်ကျင်းစာ အတွက်
171 ဉီးကိုကိုထူး+ ဒေါ်စန္ဒာအောင်၊ သား မင်းသီဟထူး၊ သမီး ဆုသီရိထူး မိသားစု မှ ကျွန်းပါကေး တစ်ကျင်းစာအတွက်
172 ဒေါ်စိန်စိန်အား အမှူးထား၍ ဉီးဖေဖေတင်+ဒေါ်မြတ်မြတ်မွန်၊ သမီးယွန်းယွန်းနှင့် ရွှန်းရွှန်း မိသားစု
173 ခင်ပွန်းဖြစ်သူဉီးမြင့်စိုးအားရည်စူး၍ ဒေါ်သန်းသန်းဌေး၊ သားမောင်ဝေယံစိုး+ မလှိုင်နန္ဒာဆွေ၊ မြေး မစင်သီဟန်၊ သမီး မအဏ္ဏဝါစိုး မိသားစု
174 မောင်လင်းထက်အောင်၊ မောင်ဖြိုးသန့်အောင် တို့၏ လုပ်အားခ မှ လျှောက်လမ်းကျောက်ပြား အတွက်
175 ကွယ်လွန်သူ ကာတွန်းမောင်ဝဏ္ဏ အားရည်စူး၍ ဒေါ်ပြုံး မိသားစု
176 သမ္ဘူလ ရဲမြင့် မိသားစု မှ တရားထိုင် ဓမ္မာရုံ
177 ဉီးကံလှတင်ထွန်း+ ဒေါ်စန္ဒီဆွေ၊ သားမင်းသက်တင်ထွန်းမိသားစု မှ လျှောက်လမ်းကျောက်ပြား အတွက်
178 နှစ်ဖက်သော အဖိုးအဖွား နှင့် မိဘများအားရည်စူး၍ ဉီးဟန်ညွန့်+ဒေါ်စုလေးတင်၊ သားမောင်ထက်လူ နှင့် မောင်သန့်သူဇော် မိသားစု မှ လျှောက်လမ်းကျောက်ပြား အတွက်
179 ဦးမြင့်သောင်း+ဒေါ်မူမူ အောင်
180 AZ Donation Group (ပါကေး)
181 ကွယ်လွန်သူပါပါး ဦးစောစိန်၊ဦးခင်မောင်ရင် ၊ကိုကျော်ဇင်ဦး(၆လပြည့်) တို့အားရည်စူး၍ ကျန်ရစ်သူ မိသားစု မှ ဓမ္မာရုံ ပါကေးတွက် S$500 နှင့် တရားထိုင်ဓမ္မာရုံအတွက် S$500
182 ကွယ်လွန်သူ မိခင်ကြီး ဒေါ်ရီရီအား ရည်စူးပြီး နှစ်ဖက်သောဘိုးဘွားမိဘများအား အမှုးထား၍ ကိုထွန်းနိုင်လင်း+ မနွဲ့လေးရီ သားမြတ်ထက်လင်း မိသားစု(ပါကေး)
183 ဦးမင်းထွန်း+ ဒေါ်တင်တင်မိုး သား သူရဦး မိသားစု
184 ကိုထွန်းလင်း+ မဆုမေ သား ဟိန်းသော် သမီး ခိုင်ဆုဆုစံ (ဆုလာဘ်ဖြိုး ကုမ္ပဏီ နှင့် Hein ဆံသ ဆိုင် Hague Decoration ) မိသားစု
185 စတေနာရှငျ ဓမ်မာမိတျဆှေ သူငယျခငြျးတဦး
186 မဖြူဇာခိုင် မိသားစု (ပါကေး)
187 မနီနီမြင့် မိသားစု (ပါကေး)
188 မမြမြသင်း မိသားစု(ပါကေး)
189 မသိမ့်ပပအေး မိသားစု(ပါကေး)
190 မစုအိလှိုင်မွန် မိသားစု(ပါကေး)
191 မစုစုလွင် မိသားစု(ပါကေး)
192 မိဘများဖြစ်ကြသော ဦးစိုးသိမ်း+ ခဒါ်ခင်မမအား အမှူးထား၍ သမီးမယဉ်မင်းသိမ်း (ပါကေး)
193 ၂၉/၂ နေ့ကွယ်လွန်သူဦးမောင်ချိန်အားရည်စူး၍ကျန်ရစ်သူမိသားစု(ပါကေး)
194 နှစ်ဖက်သောမိဘများအားအမှူးထားပြီး ကိုထွန်းထွန်း+ မနီနီအောင် သား ထွန်းအောင်နိုင်၊ ကောင်းကျော်လင်း မိသားစု (လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်း အတွက်)
195 ဦးကျော်ဝေ+ ဒေါ်ညွန့်ညွန့်ဆွေ သား မင်းအောင်ဖြိုးကျော် မိသားစု(ပါကေး)
196 ကွယ်လွန်သူအဖိုးအဖွားနှင့် မိဘများဖြစ်သော ဦးကံထွန်း+ ဒေါ်သန်းအေး(၇)နှစ်ပြည့်အားရည်စူး၍သမီး မဥမ္မာထွန်း
198 ဦးလုံးစိန်+ ဒေါ်ဌေးဌေးရီ မိသားစု (ပါကေး+ဖျာ-၁+ခြင်ထောင် ၉ လုံး+မီးအားမြှင့်စက်)
199 ဦးတော့မင်း + ဒေါ်ရွှေ မိသားစု
201 ကိုတင်ထွန်းတိုး+မမော်မော်ဝင်း (ပါကေး)
202 ဒေါ်သီသီလှိုင် (မီးအားမြှင့်စက်)
203 ကိုထက်မင်းသူစိုး+ မချောစုတင်
204 ဇီးဖြူကုန်းကျေးရွာ ကရင်ဒုံးယိမ်း အဖွဲ့(၁)
205 ဇီးဖြူကုန်းကျေးရွာ ကရင်ဒုံးယိမ်း အဖွဲ့(၂)
206 ဇီးဖြူကုန်းကျေးရွာ ကရင်ဒုံးယိမ်း အဖွဲ့(၃)
207 ဇီးဖြူကုန်းကျေးရွာ ဝေယျာဝစ္စ အဖွဲ့
208 ဦးကိုကိုအောင်+ ဒေါ်ခင်စိမ်းအေး သား ထက်မြတ်အောင် မိသားစု က သား ထက်မြတ်အောင် မွေးနေ့ အလှူအဖြစ် (US$ 1066 တန်ဖိုးရှိ ) LED လျှပ်စစ်မီးလုံး မီးချောင်း အလှူ
209 ကိုဖြိုးမြင့်ဦး+ မရည်ရည်ဝင်းဟန် မိသားစု (နေပြည်တော်) တရားထိုင်ဖျာ ၇ချပ်စာ
210 မမြတ်သန္တာအေး မွေးနေ့ အလှူအဖြစ် ဒေါ်မြင့်မြင့်ရွှင်မိသားစု (ကျွန်းပါကေး အတွက်)
211 မအေးသီတာ မွေးနေ့ အလှူအဖြစ် ကိုရဲထွဋ်+ မအေးသီတာ မိသားစု
212 ဦးကျော်ဇော+ ဒေါ် သိင်္ဂီ သမီးဖူးမြတ်ကေသွယ်၊ အိသဉ္ဇာသွယ် မိသားစု( ကျွန်းပါကေး ၁ကျင်းစာ အတွက်)
213 ကိုမြင့်ဌေး + မတင်ဇာနီကျော် မိသားစု
214 ကွယ်လွန်သူသားကြီး မောင်ဆန်းစည်သူ အား ရည်စူး၍ ကျန်ရစ်သူ မိသားစု
215 ကိုဖြိုးမြင့်ဦး+ မရည်ရည်ဝင်းဟန် မိသားစု (နေပြည်တော်)
216 ကိုမြင့်ဌေး + မတင်ဇာနီကျော် မိသားစု
217 ကိုဇော် မွေးနေ့ အလှူ
218 ဒေါ်မြတ်မြတ်မိုး၊ ဒေါက်တာသင်းသင်း ညီအမ(လသာလမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့)
219 မိဘနှစ်ပါးအား အမှူးထား၍ ဒေါ်သီတာသိန်း (ရန်ကုန်)
220 မထက်ထက်အောင်က မွေးနေ့အလှူ
221 ဦးတင်အုန်း+ ဒေါ်ခင်မြင့်ကြည်၊ သမီး မချောစုတင် မိသားစု (မန္တလေးမြို့)
222 ကိုကောင်းဆက်+ မအင်ကြင်း (ကောင်းဆက် ဆေးဆိုင်)
၁ သိန်း ၅ သောင်း ကျပ်
224 ကိုမိုးသန့်လွင်+ မဇင်ဝါမြင့် မိသားစု
225 ကိုအောင်သန်းထွေး+ မအိသူအောင်
226 ဦး၀င်းဇော်+ ဒေါ်ယုယုမြိုင် သား မောင်ကောင်းမြတ် မိသားစု
227 Ng Chee Chong + Phyu Phyu Thwin သား Ng Kai
228 ဦးဇော်မြင့်+ ဒေါ်အေးအေးမြင့်၊သမီး မအေးချမ်းမြတ်+Mr. Tang Liangyao + မြေး ဘုန်းပြည့်ဇော် နှင့် သမီး မဆုပန်ထက် မိသားစု
230 ကိုအောင်မျိုးထွန်း+ မစုလင်းထက် သား -မောင်ဉာဏ်ဇေထက် မိသားစု
231 ဒေါ်လှလှ၀င်း (‌မြောက်ဒဂုံ)
235 မိဘနှစ်ပါးအားရည်စူး၍ သား အောင်ပြည့်စုံအေး ကောင်းမှု
236 ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီး ဉီးခင်မောင်ထွေး နှင့် ညီမ မမြတ်မြတ်လွင်တို့အား ရည်စူး၍ မိခင်ကြီးဒေါ်တင်မကြီး အမှူး ထားပြီး ကိုကျော်ကျော်ဦး+ မထိုက်ထိုက်ကျော် သား မောင်ကောင်းထက်၊ မောင်လင်းထက်အောင် မိသားစု
237 ဦးသန်းမြင့်ဦး+ ဒေါ်ရီရီနိုင် သမီး မအေးမြတ်မွန်
238 နှစ်ဘက်မိဘများအားအမှူးထားပြီး မောင်ဆက်နိုင်+မဝင်းဝင်းမာ
239 နှစ်ဖက်သောမိဘများအား အမှုးထား၍ ကိုသန့်ဇော်နိုင် + မနီတာခင်စိုး နှင့် သား Lucas Lin (Ko Thant Zaw Naing + Ma Nitar Khin Soe and Son Lucas Lin )
241 ဒေါ်သီသီလှိုင် က စံရွှေရတနာကျောင်းတည်ဆောက်ရေးတွင် အထွေထွေ အသုံးပြုရန်အတွက်
242 ဦးမြတ်ဌေးလင်း+ ဒေါ်စုစုကို သား ကိုမြတ်ကိုအေး + မကေဇင်ဟန် (မြေး)သားသား ပီတိ၊ သမီး မရတီလင်း မိသားစု “Overhead Tank, Ground Tank နှင့် Water Treatment System အတွက် ကျပ်သိန်း ၁၅၀ အလှူ”
243 ဒေါ်သန်းဝင်းအားရည်စူး၍ မကြည်ကြည်တင်၊ မအေးအေးကြူ ၊ မကြည်ကြည်စိန် (သန့်စင်ခန်းတည်ဆောက်ရေးအတွက်)
244 ဒေါ်သန်းဝင်းအားရည်စူး၍ မကြည်ကြည်တင်၊ မအေးအေးကြူ ၊ မကြည်ကြည်စိန် (တရားထိုင် ဓမ္မာရုံတည်ဆောက်ရေးအတွက်)
245 ဒေါက်တာတိုးအောင် + ဒေါ်သင်းသင်းနိုင် မိသားစု
၂ သိန်း ၂ သောင်း
247 ဦးဆွေထွန်း+ ဒေါ်ကြည်စန်း
၁ သိန်း ၁ သောင်း
၄ ၄၀၀၀ ကျပ်
249 မိဘနှစ်ပါးအား အမှူးထား၍ ကိုအောင်မြင့်မြတ်က စံရွှေရတနာကျောင်း သန့်စင်ခန်းတွင် အသုံးပြုရန် Asian type toilet bowl ( Including Installtion, piping and accessories)
250 မခင်သက်သက်ငြိမ်း (သန့်စင်ခန်းတွင် အထွေထွေအသုံးပြုရန်)
251 (၁၈) နှစ်ပြည့် မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည် အလှူအဖြစ်ဦးဝေလင်းဦး + ဒေါ်ဝေဝေပြုံး သား မောင်ထက်ပိုင်ထူး မိသားစုက စံရွှေရတနာကျောင်း သန့်စင်ခန်းတွင် အသုံးပြုရန် Asian type toilet bowl ၁ခုစာ (Including Installtion, piping and accessories)အတွက်
253 မခင်ဥမ္မာထွန်း မွေးနေ့အလှူ
254 ကွယ်လွန်သူ ဖခင် (ဦးထွန်းမြင့် ) အားရည်စူး၍ မိခင်ဒေါ်ရင်ရင်ရွှေ မိသားစုတရားထိုင် ဓမ္မာရုံ သံဃာခန်း ကြမ်းခင်း (SPC Flooring) အလှူ အတွက်
255 ကွယ်လွန်သူ မဝင်းရူပါအား ရည်စူး၍ ကိုကျော်ဇေယျ+ မဝင်းနန္ဒာ မိသားစု မှ စံရွှေရတနာကျောင်း တရားထိုင် ဓမ္မာရုံ သံဃာခန်း ကြမ်းခင်း (SPC Flooring) အလှူ အတွက်
tr> 255(a) U zaw Myint (SPC Flooring) အလှူ အတွက်
256 နှစ်ဖက်သော မိဘများ ဖြစ်သော ဦးရဲမင်းထွန်း+ဒေါ်တင်တင်မြင့်၊ ဦးအောင်ကြင်+ဒေါ်စိန်ရီ တို ့အား အမှူးထား၍ ကိုမျိုးမင်းသိမ်း+မခင်စုစုအောင် မိသားစု
257 နှစ်ဘက်သော မိဘများအားအမှုးထား၍ကိုစိုးလင်းထွန်း + မသန္တာလွင် သမီး သက်ကြည်နူးစံ သား ဇွဲဝေယံပိုင် မိသားစု (ရန်ကုန်မြို့)
258 မိဘများဖြစ်ကြ​သော ဦးဝင်းကြည် + ​ဒေါ်ခင်​ဌေးတို့အား အမှူးထား၍ သမီးရတနာဝင်း က စံရွှေရတနာကျောင်း ဓမ္မာရုံ ကျွန်းပါကေးအတွက်က်
259 ကိုမိုးသူ မိသားစု (အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု) မှ စံရွှေရတနာကျောင်း သန့်စင်ခန်း တည်ဆောက်ရေးအတွက် ၁သိန်း၁သောင်း
260 ဦးခင်မောင်မြင့်+(ဒေါ်သင်းသင်းဆွေ) သမီး ခင်စန္ဒီဆွေ မိသားစု (ဘိုထိုင် Toilet တစ်ခန်း)
261 မိခင် ဒေါ်ကျင်မြိုင် အားရည်စူး၍ သမီး မရီရီမြိုင် ကောင်းမှု ( ဘိုထိုင် bowl)
262 သဲစုမွန် ( ဘိုထိုင် bowl)
263 Alex Liu Aung Kyaw+Mya Mya Htay Daughter Lui Bao Xia(Toilet )
264 ကိုနေမျိုးအောင်+ မရည်မွန်ချို မိသားစု)
265 ဒေါ်နန်းနန်းစိုး၊ ဒေါ်လှလှမော်၊ ဒေါ်လှလှထွေး၊ဒေါ်လဲ့ယဥ်ဝင်း၊ ဒေါ်ခိုင်မော်တိုး၊ ဒေါ်ဆွေဆွေဝင်း၊ ဒေါ်ဥမ္မာထွန်း၊ ဒေါ်လဲ့မွန်ဝင်း၊ ဒေါ်စန်းစန်းဝင်း နှင့်မိသားစုများကောင်းမှု(ဘိုထိုင် Toilet တခန်းစာအတွက်)
266 မမြတ်သိင်္ဂီသန်း(ဘိုထိုင် bowl)
267 ကွယ်လွန်သူ ဖခင် ဦးအိုက်စိန် နှင့် ကွယ်လွန်သူ အမ မထားထားမြင့်အား ရည်စူး၍ သား/မောင် ကိုနေအောင်လတ်(ဘိုထိုင် bowl)
tr> 268 ကျေးဇူးရှင် ဖခင်ကြီး(ဦးလှအောင်)အားရည်စူး၍ မိခင်ကြီးဒေါ်နုနုကြည် / အစ်မကြီး မခင်ခင်ပြုံး / ကိုကျော်ဇင်ဝင်း-မဇာဇာဝင်း သမီးလေး ရှင်းသန့်သန့်ဖြူ တို့အားအမှူးထား၍ မနှင်းနှင်းယု မိသားတစု Toilet အလှူ
269 ဦးကျော်+ ဒေါ်စောကြည် သားမောင်မင်းဆွေ မိသားစု
270 ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကြီး ဦးမျိုးမင်းနှင့် မိခင်ကြီး ‌ေဒါ်ချိုချိုအား ရည်စူး၍ ဦးဇေယျာဝင်း၊ ဒေါ်ချိုလင်းစံ၊ ဦးမျိုးကျော်သူ၊ မထွေးနုနုယဉ် မောင်နှမမိသားစု(Toilet)
271 ကိုဇော်လင်းအောင်+မဇင်မာထွန်း မိသားစု
272 ဦးအောင်ဝင်းခိုင်+ ဒေါ်သူဇာစံ မိသားစု
274 ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကြီး ဦးခင်ထွန်း အား ရည်စူး၍ ဒေါ်၀◌င်း သမီး မဖြူဖြူခင်
275 ကိုတင့်​​ဝေ+ ​မပိုပိုလွင်မိသားစု နှင့် မိတ်​ဆွေများဖြစ်ကြ​သော ကို​ဇော်ဝင်းထွန်းနှင့် မနန်းသဇင်မြင့်
၂ သိန်း ၁ သောင်း
276 ဒေါ်စိန်စိန် အားအမှူးထား၍ ဦးဖေဖေတင် ဒေါ်မြတ်မြတ်မွန် သမီး ယွန်းယွန်း နှင့် ရွှန်းရွှန်း
277 အဖွား ဒေါ်ခင်ရီ အမှုးထား၍ ဦးဇော်မြင့်+ ဒေါ်အေးအေးမြင့်၊သမီး မအေးချမ်းမြတ်+ Mr. Tang Liangyao မြေး ဘုန်းပြည့်ဇော် နှင့် သမီး မဆုပန်ထက် မိသားတစု က စံရွှေရတနာကျောင်း တရားထိုင် ဓမ္မာရုံ သံဃာခန်း ကြမ်းခင်း (SPC Flooring) အလှူ အတွက်သံဃာခန်း အခင်း ၁ကျင်းစာ
၂ သိန်း ၄ သောင်း
278 ဒေါ်နီနီဝင်း မိသားစု
279 အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် ဆန်ဟိုဆေးမြို့ နေ ဦးအမွန် နှင့် ဒေါ်စန်းစန်းဝင်း ၊ သမီးကြီးရတနာဝင်း နှင့် သမက်ဂျော်ဒန်၊ သမီးငယ် မြတ်ဆုမွန် တို့မိသားစု
280 ကိုအောင်ကျော်စိုး+မဝါဝါငြိမ်း သား ရှင်းသန့်တည်ကြည် ၊ ဟယ်ရီလင်းသန့် ( Seven Diamonds Construction)
281 ဦးဝင်းညွှန့်+ ဒေါ်စန်းစန်းရီ မိသားစု က စံရွှေရတနာကျောင်း တရားထိုင် ဓမ္မာရုံ အထွေထွေ ဆောက်လုပ်ရေး အတွက်
282 ကွယ်လွန်သွားသော အဘိုးအဘွားနှင့် မိဘနှစ်ပါး အားရည်စူး၍ ကိုစန်းအေး
283 ခင်ပွန်းကြီး ၁၀ပါး အားရည်စူး၍ဒေါ်အေးနွယ်မိသားစုက စံရွှေရတနာကျောင်း တွင် အသုံးပြုမည့် ရေသန့်စက်နှင့် ပိုက်သွယ်တန်းမှုအတွက် "ရေအလှူ" အဖြစ်
284 မခင်သက်သက်ငြိမ်း - ကျွန်း စားပွဲခုံ ၂ခုံ
၈ သိန်း ၆ သောင်း
285 ဆရာတော်ဦးဥက္ကဌ၏ မယ်တော်ကြီး သီလရှင်ဆရာကြီး ဒေါ်ဓမ္မဒိန္နာ -အလူမီနီယမ်လုပ်ငန်းအတွက်
286 ဒေါ်သီသီလှိုင် က စံရွှေရတနာကျောင်း ဓမ္မာရုံတွင် အသုံးပြုမည့် Steel sink အတွက်
287 နှစ်ဖက်သော မိဘများအား အမှူးထား၍ ကိုကျော်ဇောလင်း+ မယုသင်းချို မိသားစု (စင်ကာပူ)-ဗောဓိ ညောင်ပင်
288 နှစ်ဘက်မိဘများ ကို အမှူးထား၍ကို မျိုးအောင်စန်း+ မကျော့ကျော့ ခိုင် သမီး စောရဒီယာ မိသားစု-ဗောဓိ ညောင်ပင်
289 ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကြီး ဦးညွန့်တင်အား ရည်စူး၍ ကိုစည်သူဝင်း + မချိုသဲ မိသားစု-ဗောဓိ ညောင်ပင်
290 Dr နန်းထွေးခမ်းမိသားစု စံရွှေရတနာကျောင်း ဓမ္မာရုံတွင် အသုံးပြုမည့် Steel sink အတွက်
291 Dr နန်းထွေးခမ်းမိသားစု ၁) ဓမ္မာရုံ အနောက်ဘက် မိန်းတံခါး အတွက် အလှူငွေ S$ 990 နှင့် ၂) ဘေးဘက်အဝင်တံခါး ပြူတင်းတံခါးပါ အလူမီနီယမ် နံရံတခုစာအတွက် အလှူငွေ S$ 1720
292 ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကြီး ဦးထွန်းမြင့် အားရည်စူး၍ မိခင်ဒေါ်ရင်ရင်ရွှေ မိသားစု- အလူမီနီယမ် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်
293 ကွယ်လွန်သူ ဖခင် ကြီး ဦးခင်ငုတ် နှင့် မိခင် ကြီး ဒေါ် ရီ တို့ အားရည်စူး၍ သမီး -ဒေါ် မေစီ-အလူမီနီယမ် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်
294 ကွယ်လွန်သူဖခင် ကြီး ဦးကျော်မြင့် (၁)နှစ်ပြည့် ရည်စူးအလှူအဖြစ် မိခင် ကြီး ဒေါ် ကျင်ကြူး၊ သမီး မတင်ဇင်ကျော်
295 ကိုဖြိုးမြင့်ဦး +မရည်ရည်ဝင်းဟန် မိသားစု (နေပြည်တော်) က စံရွှေရတနာကျောင်း သန့်စင်ခန်း
296 ဦးကျော်စိုး+ ဒေါ် ဌေးဌေးခင် မိသားစု
297 ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကြီး ဦးသိန်းဝင်းအားရည်စူး၍ ဦးကျော်ကျော်ညွန့်+ Drနွယ်နီအောင်မိသားစု (မုံရွာမြို့)
298 မခင်သက်သက်ငြိမ်း (ပန်းအိုး နှင့် အထွေထွေ)
299 မိဘများရည်စူး၍ ဒေါ်သိန်းနု နှင့် မောင်နှမ မိသားစု
300 နှစ်ဖက်မိဘများ ရည်စူးအမှူးထား၍ ဇော်ဝင်းမြင့် မော်မော်မြင့် သား Jerry Myint ဆွစ်ဇာလန် မိသားစု
302 ဦးအောင်သိမ်း ဒေါ်မြင့်မြင့်ဦး မိသားစု
304 နှစ်ဘက်သောမိဘဘိုးဘွားဆွေမျိုးများအားရည်စူး၍ ကိုနေမင်းထွန်း+မကျော့ကျော့ဆွေ၊ သမီး ဆိုဖီယာကျော့ထွန်း၊ သား ဟင်နရီမင်းထွန်း (North Carolina, USA) ကောင်းမှု
305 ဉီးမြရှောင် ဒေါ်မညွန့် သမီး မခိုင်ဇာဉီး မိသားစု
306 ကိဒေါက်တာ ဦးမောင်မောင်ကလေး ကိုရည်စူး ၍ ဇနီးဒေါ်ခင်လှမြင့် နှင့် သမီး ဒေါက်တာ မွန်မွန်ကလေး ( ယူကေ)
308 ဦးတင်ဝင်း+ဒေါ်သန်းသန်းညွှန့် မိသားစု
309 ဦးဇော်ဝင်းအောင် နှင့် ဒေါ်စီစီဝင်းမိသားစု စင်္ကာပူ
310 ဦီးလှသောင်း၏(၉၀)နှစ်ပြည့် နှင့် ဒေါ်တင်အောင်(၈၇)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူမြောက်ဒဂုံ ရန်ကုန်
311 ကိုဆန်းဝင်း+ မေသက်ဗိုလ် သမီး သန့်သော်တာဝင်း , သွန်းရတီဝင်း မိသားစု
312 နှစ်ဖက်သောမိဘများမားရည်စူး၍ ဦးသွန်းလှိုင်+ဒေါ်လှလှပုံ သားသမီးမြေးမြစ် မိသားစု
313 ကိုပြုံးချို+ Kate Australia
314 ဦးအောင်မြင့်+ ဒေါ်ညွန့်သိန်း သမီးမသင်းသင်းခိုင် မိသားစု (သံလျင်မြို့) မိသားစု ဓမ္မာရုံအလှူမီနီယမ် တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း အတွက်
315 မိဘဆရာသမားများအားအမှုးထား၍ ကိုဇေယျာအောင်+ မညွန့်ရီမိသားစု ဓမ္မာရုံအလှူမီနီယမ် တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း အတွက်
316 ဦးမြင့်သိန်း+ ဒေါ်မိုးသူခင် သားမောင်ထွဋ်ဦးလင်း မိသားစု
317 ဦးတင်အောင်နှင့် ဒေါ်ခင်သန်းနွဲ့ သမီးမအိအိအောင်၊ သားမောင်ကျော်ထွန်းအောင် သားမောင်ကျော်ထူးအောင်နှင့် မစိုးမြတ်ထွေး သားလေးမောင်ဇေယျာအောင်မြတ်မိသားစု (ပျဉ်မနားမြို့) (လျှပ်စစ်မီးအလှူ)
318 ကွယ်လွန်သူ မိခင်ကြီးဒေါ်ထွေးမှီ (၆)နှစ်မြောက် ရည်စူး အလှူ(လျှပ်စစ်မီးအလှူ)
319 မဝင့်ရတနာထက်မှ မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် အလှူ
320 ဒေါ်ဌေးဌေးရီ နှင့် ထက်နိုင်လင်း မွေးနေ့အလှူအဖြစ် ဦးလုံးစိန်+ဒေါ်ဌေးဌေးရီ မိသားစု(လျှပ်စစ်မီးအလှူ)/td>
321 ဦးသန်းမြင့်ဦး+ဒေါ်ရီရီနိုင် သမီး အေးမြတ်မွန် မိသားစု(လျှပ်စစ်မီးအလှူ)
322 ကွယ်လွန်သူ မိဘဆွေမျိုးများအားရည်စူး၍ ကိုဖြိုးဇော်+မမေသူထက် မိသားစု(လျှပ်စစ်မီးအလှူ)
324 ဦးဘုန်းမြင့်+ ဒေါ်စီစီဝင်း မိသားစု (ရန်ကုန်)(လျှပ်စစ်မီးအလှူ)
325 Dr မင်းထွဋ်+ Dr ခိုင်နွယ်ဦး မိသားစု (Jamaica)(လျှပ်စစ်မီးအလှူ)
326 ဦးဇေယျာလင်း+ ဒေါ်တင်နွယ်ဝင်း မိသားစု (Jamaica) (လျှပ်စစ်မီးအလှူ)
327 ဦးမင်းမင်းကျော်ဇင်+ ဒေါ်အေးသဉ္ဇာ မိသားစု (USA) (လျှပ်စစ်မီးအလှူ)
328 ဦးအေးကျော်+ဒေါ်တင်တင်မြ ၊ သမီး ဒေါက်တာ သက်ခိုင်ဇင် မိသားစု(လျှပ်စစ်မီးအလှူ)
329 ကိုမိုးသူ (Puma Energy) (လျှပ်စစ်မီးအလှူ)ု
330 ကိုချစ်ကိုကို+မဇာခြည်ဦး (သား) ဟိန်းထက်ဖြိုး ၊ ဟိန်းသန့်ညီ မိသားစု (လျှပ်စစ်မီးအလှူ)
331 ဦးစိုးဝင်း+ ဒေါ်ခင်ကြူအုန်း သမီးမအေးမြဖြိုး၊ မချမ်းမြေ့စိုး မိသားစု (လျှပ်စစ်မီးအလှူ)
332 Yadanar Lady ကချင်ရိုးရာအထည် (online shopping) (လျှပ်စစ်မီးအလှူ)
333 ကျေးဇူးရှင် ဖခင်ဦးအောင်စိုး၊ မိခင် ဒေါ်အေးအေးနွယ်အား အမှူးထား၍ သမီး မသဇင်စိုး (ခ) အငယ်(လျှပ်စစ်မီးအလှူ)ူ
334 နှစ်ဘက်မိဘအားအမှုးထား၍ ကိုစိုးလင်းထွန်း + မသန္တာလွင်၊ သမီး သက်ကြည်နူးစံ၊ သားဇွဲဝေယံပိုင် မိသားစု(လျှပ်စစ်မီးအလှူ)
335 မိဘများအားအမှူးထား ပြီး ကိုဇော်သူရအောင် - မချောယုအောင် မိသားစု (လျှပ်စစ်မီးအလှူ)
336 ကိုကောင်းဆက် + မအင်ကြင်း - ကောင်းဆက် ဆေးဆိုင် (ရန်ကုန်မြို့)(လျှပ်စစ်မီးအလှူ)ု
337 မိဘများအားအမှူးထား၍ ကိုအေးမောင်+ မသိမ့်သိမ့်အောင် မိသားစု (လျှပ်စစ်မီးအလှူ)
338 ကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဦးမြင့်ထွန်းအားအမှူးထားပြီးဦးဝေလွင်+ ဒေါ်သန်းသန်းမြင့်မိသားစု (လျှပ်စစ်မီးအလှူ)
339 ဦးကျော်+ ဒေါ်စောကြည် သား ကိုမင်းဆွေမိသားစု (လျှပ်စစ်မီးအလှူ)
340 ခင်ပွန်းကြီး၁၀ပါးအား အမှူးထား ရည်စူး၍ ဦးခင်မောင်လတ်+ ဒေါ်မျိုးသော်တာ သား စွမ်းထက်အောင်မိသားစု (လျှပ်စစ်မီးအလှူ)
341 Sheyenne ပညာရေးအထောက်အပံ့အတွက် ရည်ရွယ်၍(လျှပ်စစ်မီးအလှူ)
342 ခင်ပွန်းကြီး၁၀ပါးအား အမှူးထား ရည်စူး၍ ဒေါ်အေးနွယ်မိသားစု (လျှပ်စစ်မီးအလှူ)
343 Singapore General Election 2020 Polling Day အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် နှစ်ဘက် ဘိုးဘွားမိဘများကို အမှူးထား ရည်စူး၍ ဦးမြင့်ဆွေ + ဒေါ်ယဉ်ယဉ်သိန်း၊ သမီး Ma Sandra Low မိသားစု (လျှပ်စစ်မီးအလှူ)
344 နှစ်ဘက်သောမိဘများအားအမှူးထား၍ ဦးဇော်ထက်အောင် + ဒေါ်အေးမြတ်ခိုင်(လျှပ်စစ်မီးအလှူ)
345 မိခင်ကြီးအား အမှူးထား၍ ဒေါ်သင်း (လျှပ်စစ်မီးအလှူ)
346 ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီး (ဦးအောင်သန်း)အားရည်စူး၍ မိခင်ကြီးဒေါ်သန်းသန်းအေးအား အမှူးထား၍ သား-မောင်ကျော်ကျော်အောင် (ခေတ္တဂျပန်) (လျှပ်စစ်မီးအလှူ)ု
347 ကိုဖြိုးမြင့်ဦး + မရည်ရည်ဝင်းဟန် မိသားစု (နေပြည်တော်)(လျှပ်စစ်မီးအလှူ)
၁ သိန်း ၅ ထောင်
348 ဒေါ်စုစုလှိုင်၊ Dr ကိုကိုလင်း မွေးနေ့အလှူ
349 ဖခင်ကြီး ဦးထွန်းသိန်း ကွယ်လွန်ခြင်း ၁၀နှစ်ပြည့် အလှူ အဖြစ် ကိုဇော်ဇော်ထွန်း+ မစမ်းမြင့်နွယ်မိသားစုု
350 စင်ကာပူ နိုင်ငံနေ ဒေါက်တာ စိုးသူရဝင်း+ ဒေါက်တာငြိမ်းစုထွန်း တို့က မင်္ဂလာ နှစ်ပတ်လည်နေ့ အလှူ
351 ‌‌‌ဒေါ်် အေးအေးမြင့် ၆၂ ပြည့်မွေးနေ့အလှူ
353 ဦးမောင်မောင်လတ်+ ဒေါ်ယဉ်သူ မိသားစု
354 ဒေါ်တီတီ မိသားစု
355 ကိုမျိုးဝင်း+ ဒေါ်ဌေးဌေး မိသားစ
356 ဦးဉာဏ်မင်း+ ဒေါ်တင်တင်ဌေး သားသမီးတစ်စုကောင်းမှုု
359 ဦးသိန်းထွန်းအောင်+ဒေါ်သင်းသင်းစိုး သမီး ရွှေမှုံ ပိုးပိုးမိသားစုမှ ၂၀၂၁ နှစ်သစ်အလှူ
360 ကွယ်လွန်သူ ဒေါက်တာ ဦးမောင်မောင်ကလေး အား ရည်စူး ၍ ဇနီး ဒေါ် ခင်လှမြင့် နှင့် သမီး ဒေါက်တာ မွန်မွန်ကလေး ( ယူကေ )
361 Pioneer Meditation Group and Singapore Yogis Group
362 ကွယ်လွန်သူ မိဘနှစ်ပါးအားရည်စူး၍ မနီလာထက်ထက်အောင် ကောင်းမှု
363 ကိုအောင်မြတ်သူ+မမြတ်စန္ဒာစိုး သမီး Mandy Myat, သား Arata Myat မိသားစု
364 ဦးဌေးကြွယ် ဒေါ်အေးအေးစိုး မိသားတစု
367 ဦးစိုးအောင် + ဒေါ်နုနုခင် သမီး သွဲ့နုစိုး
369 ဦးသန်းဦး+ဒေါ်စန်းကြည်မိသားစုမှ မခိုင်သီဇင်ဦးမွေးနေ့အလှူ
370 မိခင်ကြီး ဒေါ်စောရီ ကွယ်လွန်ခြင်း ၁ နှစ် ၉ လ ပြည့်အလှူ
371 နှစ်ဘက်သော မိဘများအား အမှူးထား၍ ကိုဖြိုးဝေအောင် ၊ မခင်နှင်းဆီ
372 ကိုငြိမ်းချမ်းသူ+မဝင်းလဲ့လဲ့အောင် သမီး ဆုရည်လင်း , မေငြိမ်းချမ်း
Update: စုစုပေါင်း စတုရန်းပေ 1213.79 ပေ လှူဒါန်းရန် ကျန်ရှိပါသေးတယ်
ကွယ်လွန်သူမိဘနှစ်ပါးဖြစ်သော ဦးအေး+ဒေါ်စန်းစန်းလွင်အား ရည်စူး၍ သား မောင်အောင်ပြည့်စုံအေး
၃ သိန်း ကျပ်
ဦးချမ်းမင်း+ဒေါ်မိမိအောင်သား ရှင်းသန့်ညီ မိသားစု
ကိုအောင်အောင်နိုင် ၊ကိုဇင်မင်းသူ (ညီအစ် ကို နှစ် ယောက် )
ဦး အောင် စိန် ကီး ဒေါ် စော အေး ng chee chong & phyu phyu thwin ,ng kai မိသားစု
အဖွား ဒေါ်ခင်ရီ အမှုးထား၍ဦးဇော်မြင့်၊ဒေါ်အေးအေးမြင့်၊သမီး မအေးချမ်းမြတ်+Mr. Tang Liangyao + မြေး ဘုန်းပြည့်ဇော် နှင့် သမီး မဆုပန်ထက်
ကွယ်လွန်သူ ဉီးထွန်းခင်အားရည်စူး၍ဇနီး ဒေါ်ခင်ကြည်နှင့်သား၊သမီး ဖြစ်သော အောင်မြင်ထွန်း|ခင်ဝတ်ရည်ထွန်း|ခင်ဇာနည်ထွန်း မိသား စု
ဖခင် ဦးထွန်းမြင့် အားရည်စူး၍ မိခင်ဒေါ်ရင်ရင်ရွှေ မိသား စု
ကွယ်လွန်သူ ဦးအောင်ထွန်းလိူင်အား ရည်စူး၍ ဒေါ်စံအောင်ခိုင်
Singapore brand selling myanmar (online shopping )
ကွယ်လွန်သူ မိခင်ကြီး ဒေါ်စန်းစန်းအား ရည်စူး၍သားကျော်ဇောလင်း + သမီးယုသင်းချို
သမီး မသွန်းလေပြေထက် ၂ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ အလှူဖြစ် ဦးထက်နိုင်စိုး + ဒေါ်ပွင့်ကေခိုင် မိသားစု
ကျေးဇူးရှင်နှစ်ဖက် အဘိုးအဖွား နှင့် မိဘများအားအမှူးထား၍ ဦးဇာနည်စိုး+ ဒေါ်ဇာခြည်သိမ့်သိမ့်သားသမီးမြေးတစု
နှစ်ဖက်သောမိဘများအား အမှုးထား၍ ကိုသန့်ဇော်နိုင် + မနီတာခင်စိုး နှင့် သား Lucas Lin (Ko Thant Zaw Naing + Ma Nitar Khin Soe and Son Lucas Lin )
ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီး ဦးကျော်အားရည်စူးပြီး မိခင်ဒေါ်လှရီအားအမှူးထားပြီး သမီးမအိအိကျော်
နှစ်ဖက်သော မိဘများ ဦးကျော်ဌေး+ ဒေါ်နွဲ့နွဲ့, ဦးဘကျော်+ဒေါ်လှလှနု အမှူးထားလျှက် ကိုသူရကျော်+မခိုင်ဇင်ကျော် သားသမီးများ သမီးယွန်းဝတီဦး သားစောမြမောင် သမီးမြသူခိုင် မိသားစု
ဦးကိုကိုကြီး + ဒေါ်သန်းအေး သမီး ဒေါက်တာစိမ့်သျှင်စိုး၊ ဒေါ်ခိုင်မော်တိုး မိသားစု
ဦးလုံးစိန် + ဒေါ်ဌေးဌေးရီ မိသားစု
Ko Min Htut Win & Ma Cho Hnin Aye မိသားစု
မိဘများဖြစ်ကြသော ဦးမောင်လှိုင် + ဒေါ်အေး၊ (ဦးကျော်စိန်) + ဒေါ်ကြည်အောင် တို့အား အမှူးထား၍ အောင်မြတ်ဦး + ဝါဝါပြုံး ၁၇ အေ ၄၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း ဗဟန်းမြို့နယ် ရန်ကုန်
သိန်း ၃၀ ကျပ်
ကွယ်လွန်သူ မိဘနှစ်ပါး ဦးဟိုခင် + ဒေါ်လီလီ နှင့် ကြီးဒေါ် ဒေါ် ဒေါ်သန်းသန်း၊ ဒေါ်သန်းသန်းဝင်း တို့အားရည်စူး၍ မမိုးစိန်စတိုး မိသားစု (မော်လမြိုင်)
ကျေးဇူးရှင် အဖိုးအဖွား မိဘများအား အမှူးထား၍ဦးထင်ကျော်+ဒေါ်မြတ်မင်းမာလာထွန်း သမီး မအိရှင်းသန့် သား မောင်ဉာဏ်လင်းထင် မိသားစု
ကို အောင်ကို မြင့်+ မထက်ထက်နိုင်
နှစ်ဘက်မိဘများကို အမှူးထား၍ကိုဖြိုးတင်သန်း+ မနွေးယုအောင် သမီးထူးမြတ်နိုး မိသားစု
ဒေါ်ကြည်ကြည်ဝင်း နှင်.သမီး သားမြေးမျာ
နှစ်ဖက်မိဘအမှူးထားရျ်မောင်ဟန်ဇော်ထွန်း + မမိုးမမကျော်
ကွယ်လွန်သူ မိဘ ဆွေမျိုးများအားရည်စူး၍ ကို ဖြိုးဇော်+ မမေသူထက်မှရိပ်သာမြေ
ကပ္ပတိန် Daniel Lim
နှစ်ဘက်မိဘများ အား အမှူထား၍ ဦးစိုးမင်းလတ်+ဒေါ်ယဉ်ယဉ်ထွန်း သမီး မရွှေသဲလိှုင် မယဉ်သီရိလတ် သား မောင်ရှင်းသန့်အောင် မောင်ကျော်ဇေယျအောင်
ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကြီး ဦးအောင်ပြန့် အားရည်စူး၍နှစ်ဖက်မိဘများ အမှူးထား၍ ကိုအောင်သန်းထွေး+မအိသူ မိသားစု
မခင်သက်သက်ငြိမ်း နှင့် တူ မောင်အောင်မြင့်မြတ်
နှစ်ဖက်သော မိဘများအားအမှူးထား၍ ကိုမျိုးမင်း+မကျော့ခိုင်စံ (သား) ကောင်းမင်းထက် မိသားစုး
ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကြီး ဦးကံရင် + မိခင်ကြီး ဒေါ်အုံး တို့အားရည်စူး၍ သမီး ဒေါက်တာသက်မွန်ဝင်း၊ မလဲ့မွန်ဝင်း
ကိုရဲမျိုးကျော်+ မနန်းထွေး ခမ်း သားစိုင်းခန့် @John မိသား စု
ကျေးဇူးရှင် ဖခင်ကြီး(ဦးလှအောင်)အားရည်စူး၍ မိခင်ကြီးဒေါ်နုနုကြည် / အစ်မကြီး မခင်ခင်ပြုံး / ကိုကျော်ဇင်ဝင်း-မဇာဇာဝင်း သမီးလေး ရှင်းသန့်သန့်ဖြူတို့အားအမှူးထား၍မနှင်းနှင်းယုမိသားတစု
ဦသန်းဝင်း ဒေါ်ခင်မာတင်သား မောင်အောင်ကိုကိုဇင်
ဦးပြုံးအား ရည်စူး၍ ဒေါ်သန်းတင် မြမြစမ်း ကုန်စုံဆိုင် မိသားစု ပျဉ်းမနားမြို့
မတင်စုစုလတ် မွေးနေ့ အလှူအဖြစ် ကိုခိုင်အောင်ဝင်း+ မတင်စုစုလတ် သား အဂ္ဂဘုန်းပြည့်၊ မင်းဘုန်းပြည် မိသားစု
ဦးတင်မောင်ဝင်း+ ဒေါ်ခင်မျိုးတင့် မိသားစု
ဦးသောင်းအေး (သား) ကိုသိန်းဇေ
ဦးမြင့်လွင်+ ဒေါ်သန်းသန်းရွှေ (တောင်ကြီး)
ဦးနေလင်း+ ဒေါ်စောကေသီမိုး (သမီးလေး) ယွန်းမီမီသော် မိသားစု
ဦးစိန်သန်းအောင် + ဒေါ်ဝင်းဝင်းကြည် မိသားစု
ကိုဝင်းဇော်ဦး+ မဌေးသန္တာအောင် သား မင်းဟိန်းထက်၊ သမီး ယွန်းမြတ်အောင် မိသားစု
မိဘများဖြစ်ကြသော ဦးအေးမင်း+ ဒေါ်ခင်စိန် တို့အားအမှူးထား၍ မအေးစုလှိုင်
ကိုမြတ်နေထွန်း+မအေးဇာလီ သား သူရိန်သန့်စင် ၊ သမီး မြတ်သီရိသော်